Amafilimu amahle kakhulu ngama-waswolves: uhlu, isilinganiso. Amafilimu amahle kakhulu ngama-waswolves
Izindlalelo zama-waswolves zivele ngisho nangesikhathi esidlule. Isidalwa esibucayi enyangeni egcwele kanye nomuntu ojwayelekile ngesikhathi sonke - ngakho-ke ngokucacile ungachaza i-monster esabekayo, ovame ukubizwa ngokuthi ingulube-indoda. Amafilimu mayelana nalezi zidalwa aphansi kakhulu ekuthandweni kwezithombe lapho kubonakala khona abathwali bokubi, njengama-vampires, izimpumputhe noma ama-maniac mani. Kodwa namanje i-cinema yazo yonke into yayo idale amafilimu amnandi amahle ngezilwane zomuntu. Cabanga ngamafilimu amahle kakhulu mayelana nama-waswolves, uhlu lwawo olwethulwa ngezansi.
"I-Wolf" (isilinganiso 6.9)
I-protagonist okuthiwa u-Will uza ekhaya ebusuku. Ngokungazelelwe, isilwane esinyama siphuma ngaphansi kwamasondo futhi sihlasela ngokumelene nomswakama wemoto. Ethukile, Uzophuma emotweni bese esondela esilokuyo ukuyihlola, kodwa isilwane sihlaba kabi igoli ngesandla bese sibalekela.
Kusukela kulo mzuzu ukuphila komfana kuyashintsha kakhulu: ngesikhathi semini ungumuntu ovamile, kodwa uma inyanga yokuthungatha ibonakala esibhakabhakeni esibumnyama, ihluke. Ekuqaleni, lezi zinguquko ziyingcosana: izinyembezi, izandla nezinyembezi, kodwa maduzane u-Will ngeke afane nomuntu, futhi ngaphezulu - impisi.
"Van Helsing" (isilinganiso 7.5)
Le filimu yanyatheliswa ngo-2004 futhi yaba uhlobo lwe-movie evelele njenge-Frankenstein ne-Dracula ka- Bram Stoker. "UVan Helsing" ufanelekile ukungena kumafilimu amahle ngama-waswolves. Uhlu lweVan Helsing elibulawe (i-hero enkulu ye-tape) izilo zinamakhulu ezidalwa ezihlukahlukene. Umlingiswa oyinhloko ungumphikisi weqiniso ngokumelene nobubi obukhonza ukugcinwa kwangasese, okubandakanyeka ekuqothulweni kwemimoya emibi ehlala emagumbini ahlukene omhlaba. U-Van Helsing uhlangane nezilo eziningi nabathakathi, kodwa manje unikwe umsebenzi omusha: ukuya eTransylvania nokubhubhisa i-vampire ephakeme - i- Count Dracula. Le-villain ihambelana ngokuphelele kumafilimu e-movie. Uhlu lwamafilimu amahle kakhulu ngalezi zilo azikwazanga ukwenza ngaphandle kwengqondo ye-Bram Stoker.
U-Van Helsing onomlingani onomngane othembekile uhamba nohambo. Esikhundleni, abalingiswa bazofunda ukuthi uDracula, kanye nabashadikazi, uzama ukuvuselela inzalo yakhe, okuyinto igazi-suckers njalo unomuntu ofile. Ngalo msebenzi bafuna ukusebenzisa umzimba we-waswolf. Ngakho-ke, ngaphezu kwama-vampires no-Frankenstein, i-protagonist ihlangene endleleni ngempisi-abantu - izidalwa kuphela ezingabulala uDracula. Futhi uVanes Helsing unquma ukusizakala ngalokhu.
"I-World Other" (Isilinganiso 7.3)
Le phrojekthi "Elinye Izwe" iphinde liwe ngaphansi kwesigaba esithi "Ifilimu Ezingcono kakhulu ze-Werewolf". Uhlu lwezindaba ezinjalo ze-horror ngeke luphelele ngaphandle kwale movie. Ngo-2003, i-movie ebonisa impi phakathi kwama-vampires nama-waswolves aqala kuma-cinema. Ngqikithi, izingcezu ezine ze-movie ezenzakalelayo ezenzakaliso zinezici ze-horror ziphume, kodwa owokuqala wathola isilinganiso esiphezulu, ngakho nguye owangena kulobu buyekeza.
Emakhulwini eminyaka, imindeni yama-vampires kanye nama-waswolves alwe phakathi kwabo. Esikhathini sethu, impi ibonakala iphelile: inhlanhla enkulu uLucian yabhujiswa, futhi inzalo yakhe yahlakazeka futhi yafihlwa emaceleni okujulile ejele. I-Vampires, ilungele ukugubha ukunqoba kokugcina, ukubamba abantu abasele beyizimpumputhe futhi bayibhubhise. Umlingiswa oyinhloko wesithombe yi-vampire Celine - intombazana encane (cishe ngangokunokwenzeka kubantu abahlala egazini abaphila isikhathi eside), okwathi ngesikhathi esisodwa, ngenkathi esesilisa, cishe yafa ngamapayipi ama-waswolves, yaqothula umndeni wayo wonke. Wasindiswa nguVictor - i-vampire evelele - futhi wathola ukufana okufanayo kuye. Amafilimu amahle kakhulu mayelana nama-waswolves, uhlu, izilinganiso kanye nezincazelo ezichazwe kulesi sihloko, avame ukulandisa ngokutheleleka abantu abanegciwane elikhethekile elibaguqulela zibe yizilwane.
I-protagonist iyasola: into ehamba kahle. Izimpisi zaqala ukusebenza ngesibindi: zihlasela abantu ezindaweni ezivulekile futhi ngesikhathi esifanayo zihlomile izikhali eziphambili zokulwa ne-vampire. Ngemuva kokulandelela i-wallet eyalimala emkhunjini, uCeline uyakwazi ukuthola ukuthi uLucian usaphila, kodwa akazange awele empini omunye welungu leCeline. Futhi lokhu kusho ukuthi phakathi kwama-vampires kubonakala kungumlandeli, kusiza isitha.
Eqala uphenyo lwakhe, uCeline wembula uchungechunge lwezimfihlakalo nemfihlakalo, ufunda ngomgomo omusha wama-waswolves futhi empeleni wabulala umndeni wakhe. Nazi izinkathazo ezinjalo. Uhlu lwefilimu ezinhle kakhulu ze-waswolves lihlotshiswe ngalolu chungechunge oluphawulekayo.
"I-American waswolf eLondon" (isilinganiso: 7.0)
Lesi sithombe siphume ngo-1981 futhi kanye nefilimu edidayo ethi "Wolf" ibhekwa njengenye yefilimu yama-classics ehlanganisiwe ekulinganisweni "Amafilimu AseWolf Wenhle kakhulu", uhlu lwayo, ngeshwa, alugcini ngokukhethekile nemiklamo efanelekayo.
Abantu ababili baseMelika bafika eLondon ukuba bajabule futhi bazungeza indawo. Umbhangqwana ongakhathazeki wabantu abajabulayo ngenxa yengozi yabo bakhetha ukuhamba hhayi isikhathi esifanele kakhulu: ubusuku benyanga. Ngenxa yalokho, emva kokukhuphukela emagumbini akude aLondon engaqondakali, abangane bahlaselwa yisidalwa esikhulu. Enye insizwa yafa ngaleso sikhathi, kanti eyesibili yayilunywa yisidalwa esingaziwa.
Kamuva, izinguquko ezimangalisayo zaqala emzimbeni womfana: kancane kancane waqala ukukhula izinwele futhi waba yidalwa elibi nesabekayo, kusukela kude ekhumbuza imvu, kodwa enezimo ezimbi kakhulu. Ukuhlushwa okungenakwenzeka kwezinguquko kuphenduka ukuzulazula nxazonke kweLondon ngesikhombiso se-waswolf.
"Enkampanini" (isilinganiso 6.9)
Amafilimu amahle kakhulu mayelana nama-waswolves atholakala ngesithombe esinamandla "Enkampanini". Isilo esinomkhuhlane sibulala intombazane phambi koodadewabo uRosalyn. Intombazane yesibili yakwazi ukubalekela, ifihla endlini ephakathi kwehlathi elimnyama. Owesifazane omdala ohlala kuwo watshela i-heroine izindaba eziningi ezimbi mayelana nabantu abasha abathandana nabesilisa abanamehlo aqabukayo kanye nentshonalanga ebusayo, bese bephela ngokuphelele, futhi akekho owake wababona futhi.
Ngesinye isikhathi, eduze komdanso oya endlini, uRosalyn osemusha uhlangana nomzingeli ongaziwa ehlathini, okwakuthandwa ngokushesha. Phakathi kwalabo abashadile ingxoxo iqalisiwe, futhi kuphela lapho intombazane ithola ukuthi ngubani lo muntu ngempela.
"I-Wolf Man" (isilinganiso 6,13)
Siyaqhubeka ukuxoxa ngamafilimu amahle kakhulu mayelana nama-waswolves, uhlu lwawo oluhlanganiswa yifilimu edidayo ye-horror. I-protagonist isikhathi eside ihlala eMelika futhi manje ibuyele ekhaya, eya eNgilandi yayo yasekhaya, ifuna umzalwane olahlekile. Lapho efika, ufunda ukuthi izinto ezimbi zenzeka endaweni edolobheni lakhe elithandayo: i-monster engaziwa ilahla abantu bendawo, futhi akekho ongayibamba. Ngaphezu kwakho konke, amaphoyisa aseScotland Yard, enza uphenyo ngokubulawa kwegazi, abonisa isithakazelo esikhulu kuleli hero. Umlingiswa uyaqonda ukuthi uba ngumsolwa oyinhloko ekubulaweni. Futhi kusukela kulo mzuzu uchungechunge lwezehlakalo ezithakazelisayo kakhulu ziqala ukuvela.
Udade womlingiswa oyinhloko uBrigitte uhlasele isidalwa esabekayo futhi umlimaza kakhulu. UBridget uzama ukwenza konke okuxhomeke kuye, ukusindisa udadewabo, kodwa imizamo ayize. Le ntombazane igcina ifa, futhi, ngaphezu kwakho konke, i-protagonist itholwe ngegazi layo.
UBridget uzizwa, ukuthi usuku nosuku izinto ezesabekayo nezingavamile zenzeka kanjani: uphenduka waba isidalwa esingaziwa nesabekayo - isigamu se-half-human. Usuku nosuku ukuguqulwa kungenakuletha intombazane ekugcineni, lapho ekugcineni iphendukela ekubeni yizilwane. U-Brigitte uthola imithi ehlukahlukene, kodwa imithi yenza kancane kancane isenzo sobuthakathaka engaziwayo egazini lakhe, kodwa ayikwazi ukuyiqeda. Amandla amantombazane ayakhula, futhi ukubukeka kwakhe kusondela esigabeni sokugcina senguquko enkulu.
Ngenhla, sasiwazisa ngokushesha amafilimu amahle ngama-waswolves. Kunezinhlobo eziningi zamafilimu ezihlukene mayelana nezimpisi nezinye ngaphandle kwalezo ezibalwe ngenhla, kodwa iningi labo, ngeshwa, liphansi kakhulu kangangokuba linikezwa ukulinganisa okulinganisa eduze kwamakaki angu-4. Asizange singene ekubuyekezweni, okubandakanya amafilimu amahle kakhulu mayelana nama-waswolves, ingxenye yesithathu ka-Harry Potter kanye ne-"Twilight" eyaziwa kakhulu, ngoba lezi zithombe ze-movie, nakuba ziyingqayizivele, zisalokhu zihlangene nokushaqeka kwangempela. Kubalulekile ukuthi sikhulume ukuthi bayakwazisa kakhulu, ikakhulukazi i-epic about the wizard encane.
Amahlaya "Amasosha okuhluleka." Abadlali be-satire ye-cinema
Ingabe ukuqhubeka kukaHarry Potter noma umlando wabahlakaniphile abancane kuphelile?
John Huston: Biography, Ukudala
U-Amy Smart: i-biography, i-filmography kanye nokuphila komuntu we-actress (isithombe)
I-Top-10: ama-movie angcono kakhulu asekelwe ezenzakalweni zangempela
Ihhotela "ePalmira Palace", Yalta. EPalmira Palace: Izibuyekezo
Sezitofu igesi ibhodlela ngezandla zakhe: nesithombe imfundo
Ubuhlungu obukhulu, ikhanda ngiyaqaqanjelwa: izimbangela kanye nezici ukwelashwa
Ukulahlekelwa ekuthengisweni: Izintambo zikagesi ezisobala. Izimali yokuthengisa zezimali Imiphumela: Izintambo zikagesi ezisobala kanye izibonelo